Sumcadda sawirka: mana5280 oo ku taal Unsplash, Farshaxanka Detour iyo Heiro
Qeybta:Aaladda6 min akhris
Hal Sano Kadib, Martiqaad Abuurista Minnesota George Floyd U Qalmay
Maanta waxay ku asteysan tahay sanadguuradii koowaad ee dilkii Mr. George Floyd iyo kacdoonnadii caddaaladda midab-takoorka adduunka ee ka billowday magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul. Ayaamihii xigay May 25, 2020 — ee lagu gudajiray aafada faaiidaysay xawaaraha nolosheena — bini aadamku wuxuu markhaati ka ahaa daqiiqadaha ugu dambeeya ee ninkan noloshiisa ceeriin iyo run. Markii aan sidaa yeelnay, waxaan si cad u aragnay xoogga iyo cunsuriyadda xad-dhaafka ah ee George Floyd-sida Philando Castile, Jamar Clark, iyo Daunte Wright, iyo kuwa kaloo badan-maalin kasta la kulma.
Wixii ku dhacay George Floyd maahan wax aan caadi ahayn. Duruufaha wuxuu ku wajahay Koonfurta wax badan nooga sheeg cadaalad darada midab-takoorka ee ka jirta Ameerika oo u horseeday inuu raadsado shaqo ka wanaagsan iyo rajada guriyeynta ee Minnesota, oo ah gobol ballanqaad weyn u galay bilow cusub. Markuu yimid, annagu gobol ahaan kumaanaan noolaan himilooyinkeenna waxaana ku guuldareysanay inaan abuurno xaalado suuragelinaya oo u saamaxaya inuu la kulmo himilooyinkiisa. Taabadalkeed, wuxuu la kulmay cunsuriyada nidaamsan ee casriga ah ee ku duugan dhamaan hay'adaha wadankan — guriyeyn, waxbarasho, shaqo, daryeel caafimaad, iyo sharci fulinta, aakhirkiina u horseeday dhimashadiisa.
McKnight wuxuu ka kooban yahay dad ku nool, ka dhex shaqeeya, daryeelna u leh bulshadan. Waxaan sidoo kale, shakhsi ahaan la kulanay xanuunka, naxdinta, iyo xiisadda geerida George Floyd, iyo xisaabinta midab-takoorka ka dhashay. Waxaan xambaarnay xanuunkii iyo culeyskii isaga dhimashadu weli mid bay ahayd dheeraad ah dhimashada, oo lagu daray kuwa kale oo aan tiro lahayn, taas oo caddaynaysa in waddankeennu leeyahay kala-sarrayn qiimaynta aadanaha ah. Nolosha iyo xusuusta ninkan qasabka iyo isku-dhafka ah, aabbe, walaal, wiil, iyo saaxiib ayaa saamayn ku yeeshay — oo sii wadaya dhiirrigelinta — ballanqaadkeenna ah inaan abuurno sinnaanta Minnesota ee isaga iyo qof kastaa u qalmo.
Anagoo rajeyneyna sanad-guuradan, shaqaalaheennu waqti ayey qaateen dib u milicso isgoysyadooda shaqsiyeed dhacdooyinka sanadkii la soo dhaafay, oo aan sii wadi doonno inaan la wadaagno dhowrka toddobaad ee soo socda.
Akhriso milicsiga shaqsiyadeed ee shaqaalaha McKnight
Muuqaalka dhagaxa weyn ee George Floyd oo ku yaal qabuuraha Say magacyadooda oo ku yaal Minneapolis bishii Maarso 2021. Sawirka sawirka: Stephen Maturen / Stringer
Waxaan qabanay sida aasaasku u sharfi karo xusuusta George, Philando, Jamar, Daunte, iyo inbadan, oo xanuunka ugu badali karo ujeedo. Su'aashu weli waa: Sidee ayaan sare ugu qaadi karnaa fursadaha bogsiinta midab iyo caddaaladda ee beesheena una tilmaami karnaa aragtideena ku aaddan sinnaanta Minnesota?
Ku dhawaaqida $1 Milyan ee Deeqaha uu Waxyooday Nolosha George Floyd
Iyada oo lagu maamuusayo sannad-guuradan, Aasaasku wuu abaalmarin doonaa $100,000 oo deeqo ah oo aan la weydiisan toban urur taas oo ka dhigaysa Minnesota meel soo dhoweyn badan, taageero leh, oo loo dhan yahay. Toddobaad kasta, waxaan ku dhawaaqi doonnaa qof qaata cusub oo abaalmarintan ku xiraya aragtideena ku aaddan sinnaanta Minnesota, nooca meesha kicin lahayd oo karti u yeelan lahayd nolosha George Floyd, oo aan la bakhtiin. Kuwani hal mar, deeqaha ku saleysan kalsoonida waxay aqoonsadaan kooxaha ka baxsan kuwa hadda na siiya waxayna xaqiijinayaan shaqada ay ka qabanayaan daaweynta iyo caddaaladda nidaamka.
Deeqda ugu horreysa waa tan Xarunta Fayoqabka Dhaqanka, Hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo Afrikaan Mareykan ah oo wajiyo badan leh ayaa udub dhexaad u ahayd fikradda ah in markii dhaqanka iyo aqoonta bulshada la barto lana qiimeeyo, ay yihiin aalado awood badan u leh caafimaadka, bogsiinta xusuusta, dhismaha bulshada, iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxaa la aasaasay 1996, Xarunta waxay la shaqaysaa shaqsiyaadka, ganacsatada, kooxaha bulshada, nidaamyada daryeelka caafimaadka, iyo wakaaladaha dawlada si ay uga caawiyaan ka gudubka caqabadaha iyagoo si fiican u fahmaya dhaqankooda, dhaqankooda, iyo naftooda. Kuwo badan ayaa yimaada Xarunta markay ku sugan yihiin mashaakil waxayna u baahan yihiin hagitaan, taageero, iyo hab lagu bogsado oo looga gudbo xaddidnaanta la dareemay. Waxaan aqoonsan nahay shaqada Xarunta inay tahay mid muhiim u ah abuurista caafimaad waarta iyo fayo qabka bulshada, iyo caawinta in badan oo hogaamiyayaal Afrikaan Mareykan ah oo ku kala baahsan Minneapolis inay helaan jaangooyooyinkooda iyo inay ogaadaan xalka dhaqanka ku saleysan ee dhibaatooyinka dunida dhabta ah.
“Hadiyadaha deeqsinimada leh ee McKnight Foundation iyo aqoonsiga shaqadeena waxay cadeyn u tahay adkeysiga iyo nafta waarta ee African American,” ayuu yiri Elder Atum Azzahir, oo ah agaasimaha fulinta iyo aasaasaha Xarunta Caafimaadka Fayoqabka. “Muddo 25 sano ah, waxaan ka faa'iideysaneynaa xikmadda odayaasheenna iyo baritaankeena dhaqanka si aan isu bogsiino oo aan u dhisno beel xoog leh. Sidii sanadbaadkii la soo dhaafay ay ahayd tan iyo dilkii Walaalkii Floyd, taageerada ay muujiyeen hay'adaha hoggaamiya sida McKnight waxay i siinayaan rajo. Kaliya wadajir ayaan u baabi'in karnaa midabtakoorka nidaamsan.
Atum Azzahir (midig) waa oday bulshada iyo aasaasaha Xarunta Fayoqabka Dhaqanka. Waxay wax ka barataa sida ay ugu badbaado aafada addoomada ka dib waana daryeel bixiye bulsho oo caafimaad oo heersare ah. Sumcadda sawirka: Xarunta Caafimaadka Fayo-dhawrka
Kuweena ka shaqeeya hay'adaha leh xoolo iyo mudnaan waa inay adeegsadaan awoodaas si aan dib ugu qoro sharciyada - si aan ugu bedelno nidaamyada taariikh ahaan xannibaya dadka, gaar ahaan dadka midabka leh - fursadaha inay ku koraan. Waxaan qireynaa in annaguba aan ogaal ahaan ugu biirnay nidaamyadan. Nidaam kasta waa bini-aadam abuuray, taas oo macnaheedu yahay inaan mid walba awood u leenahay beddel nidaamyada aan sii shaqeyn iyo baabi'inta kuwa aan waligood shaqeyn.
Nidaam kasta waa bini aadam la abuuray, taas oo macnaheedu yahay inaan mid walba awood u leenahay inaan bedelno nidaamyada aan sii shaqeynaynin isla markaana aan tirtirno kuwa aan weligood shaqeyn. —TONYA ALLEN, MADAXWEYNE
Maaddaama aan nahay urur samafal ah, waxaan ku taameynaa inaan adeegsanno nooc kasta oo raasumaal ah - deeqo, maalgashi, hoggaamin, bani'aadam, aqoonyahan, iyo bulsheed - si aan u xoojino awoodda, codadka, iyo baahiyaha bulshada, iyo inaan codsanno taageerada kuwa wadnaha iyo rabitaanka isbedelka. Waxaan u dabaaldegnaa oo aan dhiirrigelinnaa howlaha ururada ee ka socda gobolka kuwaas oo ka dhigaya Minnesota mid loo siman yahay oo loo wada dhan yahay. Waxaan u aragnaa iyagoo shaqadooda ku qabanaya siyaabo dhaqan ahaan la xiriira, oo ka caawinaya shakhsiyaadka, qoysaska, iyo bulshooyinka oo dhan inay garwaaqsadaan naxdintooda, buundada xanuunkooda, una gudbaan meel bogsiin iyo qurux ah.
Waxaan u aragnaa sinaanta inay tahay mid muhiimad gaar ah u leh hormarinta mustaqbal aad u cadaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal aad u tiro badan, waxaanan wali ku dadaalaynaa la dagaalanka iyo ka guuleysiga cunsuriyada nidaamsan ee sheegatay nolosha George Floyd iyo kuwa kale oo aad u tiro badan. Bishan aynu soo dhaafnay oo dhan, waxaan soo bandhignay dhawr siyaabood oo maalgashiyadeenna samafalku u taageerayaan aragtidan. Tan waxaa ka mid ah $12.6 milyan Hindisaha Qasnadaha Dhaqanka, taas oo aqoonsanaysa noocyo kala duwan oo heer sare farshaxanimo ah; $5 milyan Sanduuqa Kala-guurka Hantida Bulshada, kaas oo doonaya inuu dib u dhiso si guud; iyo wada shaqeyn cusub oo la sameeyo wadaagista baabuurta koronto waxaa laga heli karaa xarumo aan hagaagsaneyn. McKnight wuxuu dhawaan soo saari doonaa warbixin cusub oo sinaan leh oo wax kaqoreysa horumarka aan ka galeyno ku darista kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada himilooyinka guud ahaan shirkadda. Waxaan si joogta ah uga warbixineynaa waxa aan baranayno iyo horumarka aan sameyneyno, waxaanna kula tartameynaa kuwa kale inay sameeyaan isla qaab isla xisaabtanka labada dhinac ah.
Markaynu xusno sannad-guuradan, rajadeennu waxay tahay inaan arki doonno calaamado badan oo mustaqbal oo ka go'i doona taariikhdeenii xanuunka badnayd. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nagu soo biirto sidii aad u sameyn laheyd qaybtaada si loo hormariyo aragtidan ku saabsan Minnesota annaga dhammaan mudan.
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada